Shirwayne Aad Loo Soo Agaasimay oo ay ku Qabatay London Jaaliyada Somali Galbeed – Rasaasa News
Jun 21, 2010 Itobiya heshiis, london, ONLF, shirwayne, Somali Galbeed, UWSLF
Maalintii Axadda ee 20.06.10 waxaa badhtahama magaalada London lagu qabtey shirweyne ay isugu yimaaddeen jaaliyadda Soomaaligalbeed ee ku dhaqan waddanka UK ee kasoo jeedda Sagaalka gobol ee Dawlada Deegaanka Soomaalida. Shirkan oo aad u weynaa saacado badanna socday waxaa khadka Telka kaga soo qaybgalay Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen oo ah guddoomiyaha UWSLF iyo Madaxweynaha DDS Daauud Maxamed Cali.
Shirka waxaa ka hadley culimo, aqoonyahano iyo odayo iyagoo aad ugu faraxsanaa kulankan waxeyna dhamaanteen isku waafaqeen inuu kulan yahay midkii ugu horeeyey ee noociisa ah ee ay abid xasuustaan iyagoo dalbadey in kulamo badan oo noocan ah la isugu yimaaddo xilliyo badan si loo helo isku xidhka jaaliyadda Soomaaligalbeed isla markaana dadkii iyo dalkii waxweyn loogu qabto. Waxaa kale oo shirkan goob joog ahaa Masuul kasocda ururka ONLF Golaha Sare isaguna goobtaas kahadley
Shirkan waxuu bilawdey 4:pm saaadda London waxaana markii ugu horeyseyba lagu furey aayado quraan ah kadibna waxaa Microphone-ka lagu wareejiyey Sheekh Yasiid oo halkaas Muxaadaro qayim ah kasoo jeediyey umaddana kala hadley wanaagga ku dhaqanka diinta isagoo dhanka kalena ku dheeraadey in umadda Muslimiinta ahi ay yeeshaan hami sare loogana baahan yahay in qofwalba isagu iska bilaabo waxqabadka dadkiisa iyo dalkiisaba. Muxaadaradan oo aad udheereyd uguna habooneyn madasha ayaa dadweynuhu si aad ah u dhageystey.
Muxaadarada kadib dadkii goobta shirka kasoo qaybgalay waxaa loo daarey labo cajaladood oo laga soo direy gudihii gaar ahaan shirkii Nabadda ee ururk UWSLF ay kuyeesheen magaalada Cadaadle iyo socdaalkii Nabadda ee ururka UWSLF ay kusoo mareen jidka dheer ee laga soo bilaabo Ceelbarde, Cadaadle, Godey, Dhanaan, Qabridahare, Sheygoosh, Birqod, dhagaxbuur, Araarso, Qabribayax iyo Jijiga. Ururka UWSLF oo intii ay socdaalka nabadda ku jireen magaalo walba ku qabanayey shirweyne ay kula tashanayaan shacabka ayaa dhamaan dadweynihii goobta isugu yimidna ku ahaa mid aad u xiiso badan iyagoo dadka intooda badneyd ay u ahayd aragtidii ugu horeysey ee ay ku arkeen dhulka iyo hormarka ka socda. Cajalka labaad ayaa isna ahaa Gabay 10 daqiiqo socdey oo laga tiriyey madashii shirka Cadaadle gundhigiisuna ahaa iney Umaddu nabad u baahan tahay!.
Labada Cajal kadib waxaa dadkii oo aad u qiireysan ay u baxeen Salaaddii Casar waxaana markii laga soo laabtey salaadda Khadla tellka soo galay Sheekh Ibraahim Maxamed Xuseen oo la hadley shirka isla markaana ka hadley dhawr arimood; sababta ku keentey iney nabad qaataan iyagoon cidna dabada ka riixeynin, Waxyaabaha ay arkeen intii ay socdaalka ku jireen, waxii u qabsoomey iyo waliba Ahamiyaadka UWSLF ay maagan tahay iney waddanka ka qabtaan mar haddii ay qorigii dhigeen. Sheekh Ibraahim waxaa kale oo uu baaq u direy in dadka jaaliyadaha ee udhashey deegaanku ay waddankooda kusoo laabtaan waxna u qabtaan iyaga lafahoodana waxqabsadaan.
Sheekh Ibraahim waxuu ku nuuxnuuxsadey fursadaha yaalla iyo baahida loo qabo nabadgalyada isagoo sheegey in ururkiisu go aansdey iney nabadda qaataan markii ay darseen xaaladda waddanka iyo shacabka ayna aad ugu faraxsanyihiin iney maanta kusugan yihiin caasimadda Jijiga. Sheekh Ibraahim ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uqabsoomey illaa iyo hadda isagoo sheegey iney Illaahay mahaddii usuuro gashey iney waddankoodii yimaaddaan, shirweyne ku qabsadaan Cadaadle, Kadibna ay socdaal kusoo mareen jidka dheer illaa Jijiga, Maxaabiis badan la siidaayay kuwa kalena oo heer Federaal ahna lasiidaayo, iyo in ururkiisa iyo dawladdu ay shir ku yeesheen magaalada Jabuuti laguna heshiiyey dhamaan qodobadii iyo dalabaadkii labada dhinac. Sheekha ayaa ku nuuxnuuxsadey ahdaafta ururkiisa iyo sidey uga go antahay in la tashadaan shacabkooda, aqoonyahnka, waxgaradka, culimada iyo odayada deegaanka ayna ka qaataan talooyinkooda. Midnimada umadda iyo lagaalanka Qabyaaladda iyo waliba Hormarka ayaa ayuu ku sheegey Sheekh Ibraahim iney yihiin arimaha ugu muhiimsan ee ururkoodu rabaan iney waxka qabtaan.
Sheekha oo ka hadley heshiiska udhaxeeya iyaga dawladda Ethiopia ayaa sheegey in 10ka bisha July shirweyn lagu qabandoono magaalada Addisababa shirkaas oo ay kasoo qaybgali doonaan safaaradaha caalamka, hay’adaha aan dawliga ahayn, saxaafadda caalamka, aqoonyahanada, culimada, waxgaradka iyo qurba joogta ayaa lagu saxiixi doonaa heshiiska kama danbeysta ah ee ururka UWSLF iyo dawladda Ethiopia.
Khudbada Sheekha oo aad u dheereyd dadkuna aad u dhageysanayay waxaa ku xigey madaxweynaha DDS Daauud Maxamed Cali oo isagana hadal dheer ka jeediyey Shirkii kadiba la weydiiyey su aalo muhiim ahaa oo ay uu shirweynuhu u gudbiyey iyo codsi loo gudbiyey oo kusaabsanaa in dawladda Deegaanka Soomaalidu ay jaaliyadda Soomaaligalbeed ee waddanka UK darteed ku cafiyaan maxaabiis sidii looga bartey kal hore.
Daauud oo ka jawaabey dhamaan su aalihii ayaa dhanka codsiga shirka isagoo ka jawaabaya sheegey in maxaabiis badan oo hore ay sii daayeen, Qaarna ku sharfeen ururka UWSLF qaar kalena sii dayn doonaan isagoo dhanka kalena sheegey in maxaabiista lagu xidho caddeymo iyo danbiyo ay galeen ee aysan jirin qof la iska xidho.
Madaxweynaha DDS Daauud oo hadal dheer ka jeediyey madasha ayaa ku nuuxnuuxsadey dawladdiisa iyo waxqabadkeeda iyo qorshaha shanta sano ee DDS iyo waxybaaha ugu muhiimsan ee ay tahay iney qabtaan. Daauud ayaa aad ugu dheeraadey mahadcelinta ururka UWSLF iyo hoggaankooda go aanka geesinimada leh ee ay qaateen illaahayna waafajiyey iney nabad qaataan dadkoodana wax u qabtaan. ” Hadda waxaan sameysanay Idaacad FM ah waxaana gacanta ku haynaa TV markaas ayaan aad isugu xidhmi doonaa oo aad arki doontaa dhulkiina iyo waxyaabaha kasocda.
Madaxweyne Daauud oo la hadlayay jaaliyaadka deegaanka u dhashey ayaa yidhi “Waddankiina soo arka oo yaan la idiinka sheekeynin. Waxaad keeni kartaan xirfadihiina iyo hay’adaha Kheyriga ah oo waddanka waxbadan u qaban kara. Intaad halkaas joogtaanna nabadda xoojiya iskuna daya inaad midaysnaataan oo aad danta dalkiina kawada shaqeysaan. Fursadda aan heysano iyo midda idiintaalla ma jirto meel ay maanta dhulka Soomaalidu dagto ay taallo ee ka faaiideysta.
xiggasho Somali Galbeed